Kani ma wejigii ugu xumaa ee isbedelka cimilada na tusaayaa? | Saadaasha Shabakadda
Kani ma wejiga ugu xun ee isbeddelka cimilada?
Waxaan ka maqleynaa warbaahinta sida iyo aad iyo aad u sii xun oo waxyeello u leh dhacdooyinka cimilada. Toddobaadkii la soo dhaafay, duufaantii waxyeellaysay ee Nooca 5-aad ee Irma ayaa ku dhufatay jasiiradaha Caribbean-ka iyo Florida, iyadoo ka tagtay daadad aad u daran, tobanaan dhimasho ah iyo malaayiin guryo ah oo waxyeello soo gaadhay oo aan lahayn awood. Duufaantaan ayaa ahayd tii ugu weyneyd ee laga diiwaan galiyo biyaha Badweynta Atlantik.
Intaas waxaa sii dheer, ifafaalo kale oo aad u daran sida abaaro badan, daadad ka dhacay Talyaaniga, duufaano kulaylaha, iwm. Si joogto ah ayaa loo dhigaa. Kuwani waa saamaynta isbeddelka cimilada ee inna sugaya mustaqbalka, si sii kordheysa loo sii xoojinayo oo ka sii daran. Kani ma wejiga ugu xun ee isbeddelka cimilada?
Irma waxay timid kadib duufaantii Harvey ee koonfurta Mareykanka iyo burburka daadka loo yaqaan 'monsoon' ee Koonfurta Aasiya, taas oo ay ku dhinteen in ka badan 1.200. Ku soo dhowaanshaha, gudaha Talyaaniga, roobab mahiigaan ah oo culus ayaa sidoo kale dilay dhowr qof. Dhanka kale, wadankeena waxaan ka aqrinaa cinwaano sida "Spain waxaa heysata abaartii ugu darneyd 20-kii sano ee la soo dhaafay" ama "Kaydadka Isbaanishku waa boqolkiiba 43% awooddooda ".
Hadda duufaan kale oo ka tirsan Qeybta 1 (Hurricane Maria) ayaa markale ku dhufan doonta jasiiradaha Caribbean-ka. Duufaan labaad, José, sidoo kale waxay ka hawlgashaa badweynta Atlaantigga waxayna kicisay digniinta duufaanka kuleylaha waqooyi-bari Mareykanka
Isbeddelka cimilada ma waxaas oo dhan ayaa ka dambeeya? Saynisyahannadu waxay ka digayeen sannado in qiiqa gaaska lagu sii daayo ee ka dhashay kululaynta adduunka ay keeneyso isbeddel ku yimaada cimilada meeraha taasoo saamaynta ay ku leedahay dhacdooyinka cimilada daran ay toos u tahay. Awoodda iyo soo noqnoqoshada abaaraha, daadadka, duufaanka kulaylaha, duufaannada, iwm.
In kasta oo saamaynta isbeddelka cimilada iyo saamaynta ba'an ee bani'aadamku leeyihiin ay caddahay, haddana danaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ayaa sii socda oo la sii hor dhigayaa halkii laga hawl geli lahaa joojinta.
Waa in la caddeeyaa in isbeddelka cimilada uusan ahayn midka sida tooska ah u sababay Hurricane Irma, ama Hurricane Harvey, Laakiin way ka xoojisay iyaga waxayna u abuurtay fursado badan duufaanno badan.
Donald Trump, madaxweynaha diidmada ah ee bilooyin ka hor ka tagay la dagaalanka isbedelka cimilada isla markaana ka saaray Mareykanka heshiiskii Paris, wuxuu ku dhawaaqay Florida "aag musiibo ah," halka Houston, Texas, ay sii wado daadinta daadadka Harvey ee dhawr sano ka hor uun. toddobaadyo.
Waa inaan wax ka qabanaa isbedelka cimilada oo aan ka doodin inuu jiro ama uusan jirin, maadaama saamaynteeda ay ka badan yihiin kuwa muuqda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Kani ma wejiga ugu xun ee isbeddelka cimilada?
Aynu ka hadalno geysers
Astaamaha iyo baaxadda duufaantii María